I-ANC ihoxise ubulungu bukaLukhele osolwa kwelikaGardee | Scrolla Izindaba
Iqembu lihoxise ubulungu bukaPhilemon Lukhele ngemuva komhlangano wangoLwesihlanu wekomiti elisebenza kulesi sifundazwe, elithe ubulungu bakhe batholakala ngomgunyathi.
Esitatimendeni sangoMgqibelo, uNgelosi Ndhlovu uthe ngemuva kokuboshwa kukaLukhele ikomiti lesifundazwe le-ANC lithathe isinqumo sokuhoxisa ubulungu bakhe ngokushesha ngokuhambisana noMthetho wesine womthethosisekelo we-ANC.
“Ubulungu bukaLukhele abuzanelisi izidingo ezibekiwe zoMthethosisekelo we-ANC ngoba akayena owaseNingizimu Afrika,” kusho uNdhlovu.
Kuphinde kwatholakala ukuthi uLukhele ubeyilungu leqembu eliphikisayo e-Swatini, elaziwa nge-People’s United Democratic Movement.
NgoLwesithathu ihhovisi likaSotswebhu we-ANC lapho uLukhele abesebenza khona njengomcwaningi omkhulu liphinde lammisa ngaphandle kokumholela njengoba kusalindwe ukuqondiswa kwezigwegwe.
USotswebhu uthe ukuboshwa kukaLukhele kwehlise isithunzi sehhovisi lakhe wathi amacala abekwe wona asezingeni eliphezulu kakhulu elingahambisani nokuziphatha kwabo.
ULukhele, ehambisana noSipho Lawrence Mkatshwa kanye noMduzuzi Gama, babhekene namacala okubulala, okudlwengula, okwakha itulo lokubulala, ukuthumba nokutholakala nezibhamu ezingekho emthethweni.
Abasolwa abathathu bazogqunywa ejele kuze kube umhla ziyisishiyagalolunye kuNhlangulana uma sebebuyela enkantolo.
UHillary ubeyindodakazi yowayenguNobhala-Jikelele we-EFF uGodrich Gardee. Uduke esitolo ngenyanga edlule kanti isidumbu sakhe sitholwe ngemuva kwezinsuku ehlathini eduze kwase-Sabie.